Ọtụtụ ndị mmadụ na ụlọ ọrụ anaghị amata ike ịde blọgụ dị ka njikwa dị mma maka ịre ahịa. Otu uru m ga - achọ inye gị bụ mkpa ọ dị n’ịchọpụta ihe (ndị mmadụ na - achọ ịchọta gị site na ngwa nchọta) na nsonaazụ nke ịde blọgụ.
Enwere m saịtị abụọ iji tụnyere, Payraise mgbako na Na Mmetụta na Mwekota. Payraise Calculator bụ saịtị static ebe ọdịnaya anaghị agbanwe agbanwe oge niile. Enwere okwu ọchụchọ akọwapụtara nke a na-ahụpụtara Calculator Payraise ugboro ugboro. You'll ga-ahụ nke a na nsonaazụ ọchụchọ nke Google site na saịtị na oge na eserese na-esonụ. Emere m ụfọdụ Nchọgharị Nchọgharị ma gbanwee ụfọdụ ọdịnaya na nso nso a.
N'ihi ọdịnaya nke On Influence na-agbanwe kwa ụbọchị, ọnụọgụ ọchụchọ na-aga n'ihu na-agbanwe. Ihe agbakwunyere na-eme ka saịtị ahụ 'chọta ya' site na ọtụtụ okwu ọchụchọ yana isi okwu. N'ihi ọdịnaya ahụ na-aga n'ihu na-agbanwe, saịtị nyocha na-enyocha saịtị ahụ ma degharịa ya dabere na nchọta ndị ahụ. Rịba ama mgbanwe mgbanwe nchọta ahịhịa site n'aka Google n'oge na - aga:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme otu akụkọ a site na iji nchịkọta Google, ị nwere ike ịga na-ezo aka na isi mmalite (na nke a, Google), setịpụ ụbọchị gị, wee pịa akụ abụọ wee họrọ 'Data over Time':